Doorkii Safiyo Bassey ee Heshiiskii Puntland iyo DP World (Mashruuca Ballaarinta Dekeda Boosaaso) – Radio Daljir
Doorkii Safiyo Bassey ee Heshiiskii Puntland iyo DP World (Mashruuca Ballaarinta Dekeda Boosaaso)
Luulyo 28, 2017 3:52 g 0
Mudanayasha ka tirsan barlamaanka Puntland ayaa meel-mariyay heshiiska ay shirkad-da DP World ku dayactirayso dekadda magaalada Bosaso ka dib kalfadhi ay mudanayaashu ku yeesheen magaalada Garowe.
Heshiiskan oo ay ku baxayso lacag dhan 336 milyan oo dollar ayaaa lagu wada in lagu dhiso deked balaceedu yahay 450 mitir ,joogeeda hoosena uu yahay 12 mitir ,waxaana qorshaha ku jirta in dekedda hadda jirta lagu sameeyo dayactir balaaran.
Safiyo Cabdulqaadir Xaaji Xuseen (Bassey) oo kamid ah ganacsatada degan Dubai , isla markaana muddo ka soo shaqaynsay Heshiiska ay wada-gaareen Puntland iyo DP World ayaa sheegtay in dhismaha dekad cusub ay ka qayb-qaadan doonto horumarinta kaabayasha dhaqaalaha ee Puntland.
“Waxaan u mahad-celinayay dhamaan dadkii ka qayb-qaatay in heshiiskan uu suurtagalo oo ay ku jiraan xildhibaanada ansixiyay, runtii waxaan aaminsanahay in dakad-dan ay ka faa’idaysan doonaan dhamaan umadda Somaliyeed marka la dhamaystiro ” ayey tiri Safia oo la hadashay saxafada.
“Si gaar ah waxaan rabaa inaan u xuso madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka dekadaha Siciid Maxamed Raage oo si fiican uga qayb-qaatay in lagu guulaysto heshiiska lala gaaray DP World ” ayey mar kale tiri Safiyo.
Wajiga koowaad ee dhismaha dekadda ayaa la galin doonaa lacag dhan 136 milyan oo dollar ,halka wajiga labaad-na ay ku bixi doonto lacag dhan 200 oo milyan oo dollar sida laga sheegay kulankii lagu ansixinayay heshiiskan.
“Aniga iyo dhamaan dadkii howshan igala shaqeeyay ,waxaa naga go’nayd in uu dhaco heshiiskan ,waayo xiligan Somalia waxa ay u baahan-tahay isbadal cusub oo dhanka horumarka iyo dhaqaalaha-ba ah.
Ugu danbayn, Heshiiska ay wada gaareen Puntland iyo DP World oo fadhigeedu uu yahay magaalada Dubai ayaa waxaa ku jirta in dhismaha deked-da cusub lagu soo gaba-gabeeyo muddo 24 bilood ah ,iyadoo DP world ay maamuli doonta dekadda mudo 30 sano ah.
Safia Bassey Ayaa ugu Danbeenti sheegtay in ay keeni doonto shirkado badan oo maal gashada puntland si loo helo hormar iyo shaqo abuur badan wama.mid guul u ah shacabka puntland in ay helaan shaqo abuur badan madaama shaqo yari ka jirto dalka Somalia
OGAYSIIS: AMAL Bank Burtinle waa Furanyahay Adeegna waa Kuula Diyaar
Ra’iisul Wasaare Nawaz Shariif oo Xilkii Iska Casiley